Siyaasa Itoophiyaa: Paartiileen mormituu Tigraay waa'ee paartii Badhaadhiinaa maal jedhu? - BBC News Afaan Oromoo
Siyaasa Itoophiyaa: Paartiileen mormituu Tigraay waa'ee paartii Badhaadhiinaa maal jedhu?
27 Muddee 2019
Dr Abiy Ahimad gara aangootti dhufanii riiformii gagggeessu erga eegalanii booda aanga'oonni TPLF hedduun gara naannoo isaaniitti deebiyuun mormiisaanii karaa adda addaatiin ibsachaa jiru.
Kan isaan morman keessaa adeemsa MM Dr Abiy dhaaba ADWUI baqsuun paartii Badhaadhinaa hundeessuuf taasisan tokkodha.
Adeemsa paartiin haaraan kun itti hundeeffame walitti fufiinsaan mormanillee Paartiin Badhaadhiinaa dhiheenya kana Boordii Filannoo Biyyaaleessaatiin galmaa'uun waraqaa ragaa seera qabeessummaa argachuu isaa ibseera.
Kana ilaalchisuun BBC Tigrinyaa bakka bu'oota paartii mormitootaa naannoo Tigraay keessa socho'an sadi dubbiseera
Paartii Badhaadhinaa ija paartilee mormitoota Tigiraayiin
Paartiilee siyaasaa naannoo Tigraay keessa socho'an sadii keessaa lamaan isaanii kan dhiheenya kana hundeeffamanidha.
"Ummanni Itoophiyaa gaaffii qaba ture. Gaaffiin ture garuu ADWUI walitti baqsiisuu osoo hin taanee, gaaffii misoomaa, dimokraasii, bilisummaafi olaantummaa seeraa kabachisuu ture," jedhu dura taa'aa Paartii Gumii Biyyaaleessa Tigraay Guddittii Obbo Kiidaanee Amaneh.
Itti dabalunis Paartiin Badhaadhinaa maqaadhaaf federaaliziimii leellisulleen gochaan garuu adeemsa faallaa motummaa sab-daneessaati jechuun komatu dura taa'aan paartii kun.
Korri 'Humnoota Federaalistii' fooramii hundeessuun goolabame
Walitti makamuu ADWUI xiinxaltoonni siyaasaa akkamiin ilaalu?
"Paartiin Badhaadhiinaa sirna federaaliziimiin hordofa kan jedhu wayita ammaatti haalli qabatamaan biyyattii keessa jiru bulchiinsa sab-daneessaa mormuuf waan hin mijanneef qofaadha,'' jedhu.
Yaadni ummanni Tigraay parsantaa jaha qofaa waan taataniif gaheen siyaasaafi dinagdee keessanis haaluma sanaan kan murteeffamuudha jedhu Tigraayiif balaa qaba jechuun yaaddoo isaanii himu Obbo Kiidaaneen.
"Mootummaan jiddugaleessaa gara tarkaanfii tajaajila bilbilaa cufuu, ibsaa adda kutuu, imalawwan xiyyaaraafi bajata dhaabuutti kan ce'u yoo ta'e ammoo qabsoo ummata Tigraay dachaa hedduun kan kakaasu ta'a," jedhu Obbo Kiidaaneen.
Dura Taa'aa Walta'iinsa Dimokraasummaa Tigraay Dr Aragaawii Barihee ammoo Paartiin Badhaadhinaa kan hundeeffame yeroo dhiyoo waan ta'eef ammatti komachuun hin barbaachisu jedhu.
"Erga ejjannoofi imaammata isaa ifatti hubanneen booda Tigraayiin fudhatama qabaachuufi dhiisuu isaa baruu dandeenya,'' jedhu.
Itti dabaluunis paartiin Badhaadhiinaa kun kan ummata Tigraayiif hin fayyadne ta'uu erga ifatti hubanneen booda garuu ifatti ejjannoo keenya dhageessifna jedhaniiru.
Namoonni jijjiramicha fidan kan ummata Tigraayiin mormanii miti kan jedhan Dr Argaawiin, "gabaabumatti jijjiramni kun kan ummata Tigraayiif dhufe malee kan ummatichaan faallaa ta'u miti" jedhu.
"Kan ummatichaan faallaa ta'u yoo ta'e ammoo dursinee kan morminu nuyiidha," jedhu.
TPLF yaa'ii mana maree ADWUI irratti hirmaachuu maaliif dide?
Dr Argaawiin ADWUI'n heera mootummaa diigaa jira jechuun himatu. Garuu kan diigaa ture aanga'oota TPLF dha jedhu.
Walumaa galatti TPLF maqaan kan sirna federaalaa leellisuu, gochaan ammoo mootummaa faallaa sabdaneessummaa dhaabbatee turedha jedhu.
Kanaaf, qaamooleen jijjiramni ammaa gara sirna faallaa sabdaneessuumaatti adeemaa jira jedhan sobadha jedhu namni siyaasaa buleessi kun.
"Ani hordofaan jira. Qaamoleen jijjiramicha fidan mataan isaanii deeggartoota sirna federaalizimiiti malee kanneen morman miti," jedhu.
Qindeessaa paartii Saalsaay Wayaane Tigraay maal jedhan?
"Paartiin Badhaadhiinaa caasaa sabaatiif kan gurra kennu miti," jedhu qindeessaa Paartii Saalsaay Wayaanee Tigraay kan ta'an Obbo Tsaggaaza'aab Shishaayyee.
'Warra Tigree ta'usaaniif qofa hidhamaniifan falma'
Kanaafis sababa yoo eeran, adeemsa paartichaatiin ''walitti baqiinsaan booda sabummaan kee si duuba hin jiraatu. Waa'ee saba kee qabattee dhiyaachuu hin dandeessu" jedhu.
"Waa'ee saba kee akka ajandaatti kaasuu hin dandeessuu. Kan dhuftuus saba kee bakka butee miti," jechuun haala Paartii Badhaadhiinaa itti hubatan himu.
Kana malees, waltajjii Paartii Badhaadhiinaa keessatti yoo mo'amtee fedhiifi dantaan saba keetii fedhii warra kaaniitiin hagugameera jechuudha jechuun kaa'u.
Obbo Tsaggaaza'aab akka jedhaniitti, mootummaa jiddugalaa irraa dhiibbaaleen Tigraay irratti taasifamaa jiran jiru.
"Naannoon Tigraay bulchiinsa ofiisaa qabatee turuu qaba. Kunis dandeettii mootummaa naannichaa dabarsitee akka hin kenniineefi murtee qaamoolee biraatiin akka hin dhiitamneef ni gargaara," jedha.
Sibhaat Naggaa: Fottoquu caala humnoota fottoquuf sababa ta'anirratti qabsaa'uutu salphata
Siyaasa Itoophiyaa: 'Warra Tigree ta'usaaniif qofa hidhamaniifan falma'
8 Hagayya 2019
TPLF: 'ADWUI'n ajandaa walitti baquu mari'atee murteessuuf aangoo seeraafi siyaasaa hin qabu’
21 Sadaasa 2019
Obbo Mushee Sammuu: 'Dhaabni Tigraay Bulchu Paartii Badhaadhinaa seenuu danda'a'
Mariin MM Abiy Ahimad aanga'oota TPLF waliin taasisan waa milkaa'ee?
19 Sadaasa 2019
'Maqa balleessiin MM Abiy irratti adeemsifamaa jira' Waajirri Ministeera Muummee
Waa'ee filannoo Itoophiyaa baranaa qabxiilee ijoo shan
Jalabultii yaa'ii Liigii Arabaan waamichi waliigaltee Sudaan goote jijjiirama ejjennooti?
Chaayinaan gocha 'dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuu' nan morma jette
Naannoo Somaalee fi naannolee filannoo 54 keessatti yeroon filannoo dheerate
'Adeemsi addunyaan dhimma Itoophiyaa ilaalchisee itti jiru sirriidha jechuuf baane'
Badhaasa Noobelii, Waraana Tigraay fi Filannoo - imala MM Abiy Ahimad
Nato'n sodaa humna waraanaa Chaayinaa arbeessuu akka dhaabu Beejing gaafatte
Abbaan warraa dubartoota 38 fi abbaa ijoollee 94 du'aan boqate
Bidiruu galaana diimaa keessatti dhidhimteen godaantonni hedduun du'an
Biyyoonni garee torbaa (G7) waa'ee Itoophiyaa maal jedhan?
Boordiin Filannoo Wiixata dhufaa hojiin jira jedhee hin eegu jedhe
Gojjaamitti rasaasni cidhaaf dhukaafamu baatii lama keessatti namoota 12 galaafate